अञ्चल आयुर्वेद औषधालयमै छैन औषधि – Health Post Nepal
अञ्चल आयुर्वेद औषधालयमै छैन औषधि
२०७५ भदौ १९ गते १५:१६
बुटवलको लुम्बिनी अञ्चल आयुर्वेद औषधालयमा औषधि अभाव भएको छ । स्थानीय र प्रदेश गरी दुईवटा सरकार बुटवलमै भए पनि यहाँकै औषधालयले औषधि पाएको छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा औषधालयमा औषधि अभाव भएको हो ।
२ महिनादेखि औषधालयमा औषधि नहुँदासमेत स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । औषधि नहुँदा बिरामीहरु चेकजाँचपछि रित्तोहात फर्किन बाध्य छन् । स्टकमा रहेका चारथरी औषधिले काम चलाउँदै आएको औषधालयले त्यही औषधिले पनि बढीमा भदौ मसान्तसम्म धान्ने बताएको छ ।
स्थानीय सरकारका रुपमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले औषधिको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा औषधालय प्रदेश सरकारमातहत आएपछि औषधि खरिद नभएको दुई सरकारका प्रतिनिधिबीचको कुराकानीबाट थाहा हुन्छ । प्रदेशमातहत राखिएको अञ्चल आयुर्वेद औषधालयका लागि बजेट भने संघीय सरकारले बुटवल उपमहानगरमा पठाएको छ । यसले गर्दा औषधि कसले किन्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अलमल छ । प्रदेश सरकारको काम गर्ने संरचना तयार हुँदै गरेको र स्थानीय तहको आफ्नो जिम्मेवारीबाट हटेको अवस्थामा बुटवलको आयुर्वेदिक औषधालय अहिले बेवारिसजस्तै बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष मर्का सेवाग्राहीमा परेको छ । औषधालयका अनुसार यहाँ दैनिक ३५ देखि १ सय ५ जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् ।
‘औषधिको अवस्था के–कस्तो छ, त्यसबारे बुझ्छु,’ सुवेदीले भने, ‘आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्छु, उपमहानगरपालिका यस विषयमा चिन्तित छ ।’
आयुर्वेद विभागका अनुसार उक्त औषधालयबाट २६ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारको निर्देशन भए पनि अस्पतालले अहिले चार प्रकारका मात्रै औषधि उपलब्ध गराइरहेको कार्यालय प्रमुख डा. रमेशकुमार केसीले बताए । केसीका अनुसार अस्पतालमा २ महिनायता औषधि अभाव छ । ‘संघीय सरकारले बजेट उपमहानगरपालिकामा पठाएको छ, तर जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ,’ केसीले भने, ‘के–कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेबारे प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले कुरा अगाडि बढाउँदै छ भन्ने सुनेको छु ।’ अहिले तीन लाख मात्र बजेट आएको र उक्त बजेटले २ महिनालाई मात्र औषधि पुग्ने केसीले बताए ।
आयुर्वेदिक अस्पतालमा औषधिको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले समन्वय गर्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । ‘औषधिको अवस्था के–कस्तो छ, त्यसबारे बुझ्छु,’ सुवेदीले भने, ‘आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्छु, उपमहानगरपालिका यस विषयमा चिन्तित छ ।’ आयुर्वेदका कतिपय कर्मचारी भने औषधि अभाव भएको लामो समय बित्दासमेत बुटवल उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापनमा लापरबाही गरेको बताउँछन् ।
प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकर चौधरीले आयुर्वेद औषधालयको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा आएको बताए । उनले अञ्चल आयुर्वेद औषधालयमा औषधिको पूर्ति छिट्टै गर्न आफूहरु लाग्ने प्रतिक्रिया दिए । औषधिका लागि बजेट नगरपालिकामा गएको अवस्थामा २ छोटा तरिका अपनाएर समस्या हल गर्न डा. चौधरीले सुझाए । नगरपालिका आफैँले टेन्डरमार्फत खरिद गरी औषधालयलाई दिने वा रकम औषधालयलाई हस्तान्तरण गरी औषधालयले नै प्रक्रिया पुर्याई औषधि किनेर अभाव टार्न सकिने सुझाब डा. चौधरीको छ । ‘हाम्रो जिम्मेवारीमा आएको छ,’ डा. चौधरीले भने, ‘दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि भने केही समय लाग्न सक्छ ।’